Wellness | Desambra 2021
News Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Lalao Community, Company Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa Orinasa, Vaovao Zava-Mahadomelina Vs. Namana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Antony 10 mahatonga ny marary tsy manaraka ny baikon'ny dokotera
Ny fanarahana ny fanafody dia zava-dehibe ary manakiana mihitsy raha toa ka mihinana fanafody mamonjy aina ianao. Saingy ny marary sasany dia mbola tsy mandray ny fanafody. Ireto misy antony 10.
Fanontaniana 5 tokony apetrakao foana amin'ny mpivarotra anao
Na manana ahiahy ianao na tsia, dia tokony apetraho hatrany amin'ny mpivarotra fanafody ireto fanontaniana mora ireto rehefa manomboka fanafody vaovao ianao.
Fomba mahagaga 5 mety hisy fiatraikany amin'ny vatanao
Manomboka amin'ny fihenan'ny volo ka hatrany amin'ny fikorontanana, ny fihenjanana dia misy fiantraikany betsaka noho ny saina - miteraka fanaintainana ara-batana mihitsy aza. Andramo ireto mekanika hiatrehana ireto alohan'ny hiantraika amin'ny vatanao.
Inona ny politikam-pitsaboana TSA? Azoko atao anaty fonosana ve ny mitondra fanafody? Ny toro-hevitra omenay momba ny fanidinana fanafody mahadomelina dia hanomana anao amin'ny fialan-tsasatra mahasalama sy mahasalama.
Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny arina mihetsika sy ny fampiasana azy io soa aman-tsara
Mety aminao ve ny saribao? Milamina ve? Ianaro ny fomba fampiasana saribao ampiasana ho an'ny fandevonan-kanina sy ny detox, ary jereo hoe inona ny vokany izay tokony ho fantatrao.
Ahoana ny fomba hampihenana ny 'quaran-tinis'
Taorian'ny herintaona nisian'ny COVID-19 dia toa nifampikasoka ny coronavirus sy ny alikaola. Raha misy olana ny fisotroanao dia izao no mampihena.
Misy tombony ara-pahasalamana ve ny vinaingitra paoma?
Nandinika fikarohana izahay ary nanontany ny dokotera momba ny tena tombontsoa azo avy amin'ny vinaingitra paoma, ary nolanjainay ireo manohitra ny voka-dratsiny — ity no hitantsika.
Tena mandeha ve ny fisotroana vinaingitra paoma hampihenana ny lanja? Ianaro izay ataon'ny ACV amin'ny vatanao sy ny fomba mety mahasoa kokoa ny fanafody mampihena ny lanjany.
Antony 7 tokony hahazo vatana ara-batana isan-taona
Tsy azonao antoka raha ilaina ny fanatanjahan-tena isan-taona? Ianaro izay tafiditra ao anatin'ny fanadinana ara-batana isan-taona, hoe iza no tokony hahazo izany, ary ahoana no hitsitsiana vola amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana.
Ny sakafo tsara indrindra amin'ny toe-pahasalamana 15 mahazatra
Ianaro ny fiovan'ny sakafo azonao atao mba hifehezana ny soritr'aretin'ny toe-pahasalamanao mahazatra toy ny diabeta, tosidra ambony ary IBS.
14 manasitrana izay miasa
Tsy misy te handany ny androny ho marary eo am-pandriana (manenina ny safidin'ny omaly alina). Raha manintona ianao dia mety mila an'ireto fanasitranana hangover ireto izay tena miasa.
Ny fampiharana sy fitaovana fampahatsiahivana 7 tsara indrindra
Adinonao ve ny mihinana fanafody fanafody? Ireo fampiharana fampahatsiahivana ilaina amin'ny dokotera ireo dia handefa anao fanairana manokana ho an'ny meds, refill ary maro hafa.
Ny fampiharana tsara indrindra hanampiana amin'ny fitantanana fahasalamana ara-tsaina
Ny fampiharana fitsaboana dia tsy tokony hisolo ny fitsidihan'ny dokotera, fa ireo fampiharana fahasalamana ara-tsaina ambony indrindra ireo dia afaka manome fanampiana ho an'ireo mpampiasa tratry ny fiasan-doha na fahaketrahana.
Inona no tokony ho fantatry ny be taona momba ny vitamina
Mila miova ny sakafo mahavelona rehefa mihantitra ianao. Ireto toro-hevitra momba ny vitamina ho an'ny zokiolona ireto dia afaka manampy amin'ny fahazoana antoka fa ampy tsara ny zavatra atolotra ho an'ny 50, 60, ary 70 taona ianao.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanomezana ra
Misy olona any Etazonia mila rà isaky ny roa segondra. Ny fanomezana tokana dia ny fanomezana ra. Toy izao ny fiasan'ny, ary iza no ampiany.
Iza no afaka manome ra - ary iza no tsy afaka
Ny fepetra takiana amin'ny rà dia miaro ny mpanome sy ny mpandray. Ny meds sy ny toe-pahasalamana sasany dia mety hisakana anao tsy hanome ra. Jereo hoe iza no afaka manome ra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fahamaizan'ny mpikarakara
Mety hitondra valisoa ny fanampiana olon-tiana iray, nefa mety ho reraka ihany koa. Alohan'ny hamelezana ny fahamaizan'ny mpikarakara anao dia andramo ireto torohevitra ireto.
Ny torolàlana an'ny mpikarakara momba ny fikolokoloana tena & fisorohana ny fandoroana tanteraka ny mpikarakara
Tandindomin-doza ny fikaroham-pirenena sy ny fikorontanana ara-batana. Mianara antony mampidi-doza, famantarana ny fandoroana, ary hevitra manokana hampihenana ny loza ateraky ny fandorana.
Ny fanadihadiana tamin'ny taona 2020 CBD
Ny fanadihadiana nataon'ny CBD anay dia nahitana ny iray ampahatelon'ny Amerikanina nanandrana ny CBD, ary 45% n'ny mpampiasa CBD no nampitombo ny fampiasana azy ireo noho ny coronavirus. Ianaro ny fampiasana CBD any Amerika.
9 tsy fahampiana otrikaina mahazatra any Etazonia
Manakaiky ny 10% ny mponina amerikana no tsy ampy otrikaina. Mety hiteraka olana ara-pahasalamana tena izy io, rehefa tsy voatsabo, fa azo ahitsy miaraka amin'ireo paikady ireo.
mahazo ny fifehezana ny zaza amin'ny fahalalahana amin'ny maha-ray aman-dreny efa nomanina
ahoana no andoavan'ny ankamaroan'ny olona ny fitsaboana?
inona no ataon'ny vinaingitra paoma ho anao?
ny estrogen sy estradiol dia zavatra iray ihany
mandra-pahoviana ny sery no miala
afaka mihinana tylenol ve ianao rehefa bevohoka
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana